Venezuelan Maduro dọrọ aka ná ntị ijide onye ndu mmegide "ga-abịa" - TELES RELAY
Venezuelan Maduro dọrọ aka ná ntị ijide onye ndu ndị mmegide "ga-abịa"
Venezuelan Onye isi ala Nicolás Maduro na-adọ aka na Fraịde na njide nke onye mmegide Juan Guaidó, onye nwere nkwado nke United States na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 60 ọzọ, "ga-abịa."
Maduro kwupụtara nke a n'oge nnọkọ mgbasa ozi ụbọchị atọ ka Guaidó si njem nleta United States na Europe lọta lefuru iwu ụlọ ikpe igbochi ya ịhapụ obodo.
N'agbanyeghị iwu ahụ, ndị isi na-ahụ maka njem kwagara Guaidó ịbanye na obodo ahụ mgbe ha gafesịrị n'ụgbọ elu azụmahịa na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Venezuela. Pro-gọọmentị na-eme ngagharị iwe ebe ahụ were ya mmiri mee ihe ma jide uwe ya ka ọ na-agafe igwe mmadụ.
Onye isi ala nke Venezuela Nicolas Maduro na-ejide okwu ikpe obodo ya n'ihu Criminallọikpe Mpụ International na-ahụ maka mmachi US mgbe a na-eme mkparịta ụka na n'obí onyeisi Miraflores na Caracas, Venezuela, Fraịde. (AP)
Maduro kwuru na Fraịde na a ga-atụ Guaidó mkpọrọ ụbọchị ikpe nke usoro ikpe mkpezi nke Venezuela kpebiri na a ga-atụ ya mkpọrọ "maka mpụ niile o mere".
GUAIDO NA AKW MANR MAN MANIFESTANTS NA VENEZUELA AIRPORT
Ọ sịrị na "Thisbọchị a abịabeghị," ka o kwuru na otu ajụjụ si n’aka Associated Press. "Ma ọ ga - abịa. "
Ma ndi nyocha na ndi na emegide mmegide nke Maduro na-ekwu na usoro ikpe ikpe Venezuelan enweghi ike ilebara anya n’enweghi isi nke onye isi, yana na aru oru ya dika ogwe aka nke ike ala.
Njem Guaidó bụ nke ugboro abụọ o jere na mpụga Venezuela n'agbanyeghị mmachibido iwu ahụ. N'akụkụ abụọ ahụ, e nyere ya ohere ịlaghachi obodo.
Onye ndu ndị mgbagha Juan Guaido kelere ndị na-akwado ya n’oge ngagharị iwe na Bolivar Plaza na Chacao, ime obodo na Caracas, Venezuela, na Tuzde. (AP)
Pịa ebe a iji nweta akwụkwọ akụkọ FOX APP
Onye ndu ndị mmegide ahụ afọ 36 agbaala mgba na Maduro kemgbe ọ kpọsara onwe ya onye isi ala ọfụma nke afọ a. Guaidó gara njem mba ụwa ikpeazụ ya, n'oge nke ya zutere Onye Isi Ala Trump na White House, bụ mbọ iji nwekwuo nkwado ya ka ndị otu ya na-emegide ọchịchị na-agbasi mbọ ike ka ha nwetaghachi ume ka Maduro na-agbakọta ike ya.
Guaidó enwetala nkwado nke United States na ọtụtụ mba ndị lere anya na ntuli aka Maduro 2018 dị ka wayo na ata ụta maka ụkpụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya maka ọgba aghara na-akpata mbugharị nnukwu ma na-eyi nkwụsi ike mpaghara.
Andrew News, Danielle Wallace na The Associated Press of Fox News nyere aka na akụkọ a.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.foxnews.com/world/venezuelas-maduro-warns-of-guaido-arrest
Asịrị na iPhone 5G nke Apple nwere ike ịnwe antenna ụlọ
Ntuli aka onye isi ala na Togo: Archbishop Emeritus Mgr Kpodzro na-akwado A liveyomé Kodjo